मोवाइलमा अमिताभ बच्चनको आवाजले दिक्क भएको भन्दै अदालतमा उ’जुरी ! – News Nepali Dainik
मोवाइलमा अमिताभ बच्चनको आवाजले दिक्क भएको भन्दै अदालतमा उ’जुरी !
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २५, २०७७ समय: १९:२३:४६
एजेन्सी, २५ पुष । भारतका लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चनको आवाजले दि’क्क भएको भन्दै अदालतमा उ’जुरी परेको छ । को’रोना महामारीको सचेतनाका लागि मोवाइलमा राखिएको ब्याक टोनमा राखिएको आवाज अमताभको राखि एकामा दिक्दार भएको भन्दै एक व्यक्तिले उनि बि’रुद्ध उ’जुरी गरेका हुन् ।
उनले कसैलाइ फोन गर्दा अमिताभको आवाजले दि’क्क लागेको भन्दै दिल्लीको एक अदालतमा उजुरी दिएको खुलाएका हुन् । गत मार्च महिना देखि नै नेपालमा जस्तै कसैलाई फोन गर्दा को’रोना महामारीबारे सचेतनाको लागि ब्याकटोन बज्ने गर्दछ। यसका सम्ब न्धमा अमिताभले माफी मागिसकेको बताइएको छ । यो भन्दा अघि पनि सो आवाज रो’क्न धेरै अनुरोधहरु आएको बताइएको थियो ।
अहिले नेपालमा जस्तै मोबाइलमा फोन गर्दा भारतमा को’रोना वि’रुद्धको सचेतना बज्ने गरेको छ । मार्च देखि नै भारतमा यस्तो कलर ट्युन राखिएको थियो जसमा अमिताभ बच्चनको आवाज राखिएको छ । तर, अब यही आवाजका कारण दि’ग्दारी भएको भन्दै दिल्लीको अ’दालतमा एक व्यक्तिले उ’जुरी दिएका छन् ।
Last Updated on: January 9th, 2021 at 7:30 pm